ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(လေ)ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မောင်မောင်ကျော် ထိုင်းဘုရင့်လေတပ်ဦးစီးချုပ် အား ဂုဏ်ပြုကြိုဆို၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး | cincds
ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(လေ)ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မောင်မောင်ကျော် ထိုင်းဘုရင့်လေတပ်ဦးစီးချုပ် အား ဂုဏ်ပြုကြိုဆို၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
နေပြည်တော် ၊ ဇန်န၀ါရီ- ၈
ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မောင်မောင်ကျော်သည် ယနေ့နံနက် ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာ၌ ထိုင်းဘုရင့်လေတပ်ဦးစီးချုပ် Air Chief Marshal Chaiyapruk Didyasarin အား ဂုဏ်ပြု တပ်ဖွဲ့ဖြင့် ဂုဏ်ပြုကြိုဆိုသည်။
ဦးစွာ ဂုဏ်ပြုကြိုဆိုပွဲသို့ ထိုင်းဘုရင့်လေတပ်ဦးစီးချုပ် Air Chief Marshal Chaiyapruk Didyasarin သည် မော်တော်ယာဉ်ဖြင့်ရောက်ရှိလာရာ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မောင်မောင်ကျော်က ကြိုဆိုနှုတ် ဆက်သည်။ထို့နောက် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(လေ)နှင့်ထိုင်းဘုရင့်လေတပ်ဦးစီးချုပ်တို့သည် အလေးပြုခံစင်မြင့် သို့သွားရောက်၍ ဂုဏ်ပြုတပ်ဖွဲ့၏ အလေးပြုခြင်းကိုခံယူသည်။
ယင်းနောက် ထိုင်းဘုရင့်လေတပ်ဦးစီးချုပ်သည် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(လေ) နှင့်အတူ ဂုဏ်ပြုတပ်ဖွဲ့အား စစ်ဆေးပြီး ဂုဏ်ပြုကြိုဆိုပွဲသို့ တက်ရောက်လာကြသည့် အရာရှိကြီးများနှင့် အပြန်အလှန်မိတ်ဆက် ပေးကြ သည်။
ထို့နောက် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မောင်မောင်ကျော်သည် ထိုင်းဘုရင့်လေတပ်ဦးစီးချုပ် ဦး ဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာ ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
တွေ့ဆုံပွဲသို့ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(လေ)ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မောင်မောင်ကျော် နှင့်အတူ စစ်ဦးစီးအရာရှိချုပ်(လေ) ဗိုလ်ချုပ် ထွန်းအောင်နှင့် တပ်မတော်(လေ)မှ အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ကြပြီး ထိုင်းဘုရင့်လေတပ်ဦးစီးချုပ် နှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ထိုင်းဘုရင့်လေတပ်စစ်သံမှူး Group. Captain Pruit Tugesuinနှင့် တာဝန်ရှိ သူများ တက်ရောက်ကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲတွင် မြန်မာ-ထိုင်း နှစ်နိုင်ငံလေတပ်နှစ်ရပ်အကြား ဆက်ဆံမှုတိုးမြှင့် ဆောင်ရွက်သွားမည့် အခြေအနေများ၊ သင်တန်းသားများစေလွှတ်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊ သတင်းအချက်အလက်နှင့်နည်းပညာများ အပြန်အလှန်ဖလှယ်ရေးနှင့် ချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ်များ အပြန်အလှန်လည်ပတ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအား အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်မောင်ကျော် က ထိုင်းဘုရင့် လေတပ်ဦးစီးချုပ် Air Chief Marshal Chaiyapruk Didyasarin အား မြန်မာ့တပ်မတော်(လေ)၏ ဂုဏ်ထူး ဆောင်လေသူရဲတောင်ပံတံဆိပ်ကို တပ်ဆင်ပေးအပ်သည်။ ထိုသို့ ဂုဏ်ထူးဆောင်လေသူရဲတောင်ပံတံဆိပ်မှာ ပြည်ပတပ်မတော်အကြီးအကဲ တစ်ဦးအား ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ဂုဏ်ပြုပေးအပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့နောက် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(လေ)နှင့် ထိုင်းဘုရင့်လေတပ်ဦးစီးချုပ်တို့သည် အမှတ်တရလက်ဆောင်များ အပြန် အလှန်ပေးအပ်၍ အဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူ စုပေါင်းဓာတ်ပုံရိုက်ကြ သည်။
၎င်းနောက် ထိုင်းဘုရင့်လေတပ်ဦးစီးချုပ်က ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာ ဧည့်သည်တော်မှတ်တမ်းစာအုပ်တွင် မှတ်တမ်း တင်လက်မှတ်ရေးထိုးသည်။
ထို့နောက် နေ့လည်ပိုင်းတွင် ထိုင်းဘုရင့်လေတပ်ဦးစီးချုပ်နှင့်ဇနီး ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(လေ)နှင့်ဇနီးတို့က နေပြည်တော်ရှိ ရွှေနန်းတော်ဟိုတယ်၌ ဂုဏ်ပြုနေ့လယ်စာဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံခဲ့ပြီး အမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းများ အပြန်အလှန်ပေးအပ်ခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါ ထိုင်းဘုရင့်လေတပ်ဦးစီးချုပ် ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် နေပြည် တော်လေဆိပ်သို့ရောက်ရှိခဲ့ရာ နေပြည်တော်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်မြင့်မော်နှင့် ကာကွယ် ရေးဦးစီး ချုပ်ရုံး(လေ)မှ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ၊မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ထိုင်းနိုင်ငံစစ်သံမှူးများနှင့် တာဝန်ရှိသူများက လေဆိပ်တွင်ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ(လေ)ဗိုလျခြုပျကွီး မောငျမောငျကြျော ထိုငျးဘုရငျ့လတေပျဦးစီးခြုပျ အား ဂုဏျပွုကွိုဆို၊ တှဆေုံ့ဆှေးနှေး
နပွေညျတျော ၊ ဇနျနဝါရီ- ၈
ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ(လေ) ဗိုလျခြုပျကွီး မောငျမောငျကြျောသညျ ယနနေံ့နကျ ပိုငျးတှငျ နပွေညျတျောရှိ ဘုရငျ့နောငျရိပျသာ၌ ထိုငျးဘုရငျ့လတေပျဦးစီးခြုပျ Air Chief Marshal Chaiyapruk Didyasarin အား ဂုဏျပွု တပျဖှဲ့ဖွငျ့ ဂုဏျပွုကွိုဆိုသညျ။
ဦးစှာ ဂုဏျပွုကွိုဆိုပှဲသို့ ထိုငျးဘုရငျ့လတေပျဦးစီးခြုပျ Air Chief Marshal Chaiyapruk Didyasarin သညျ မျောတျောယာဉျဖွငျ့ရောကျရှိလာရာ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ(လေ) ဗိုလျခြုပျကွီး မောငျမောငျကြျောက ကွိုဆိုနှုတျ ဆကျသညျ။ထို့နောကျ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ(လေ)နှငျ့ထိုငျးဘုရငျ့လတေပျဦးစီးခြုပျတို့သညျ အလေးပွုခံစငျမွငျ့ သို့သှားရောကျ၍ ဂုဏျပွုတပျဖှဲ့၏ အလေးပွုခွငျးကိုခံယူသညျ။
ယငျးနောကျ ထိုငျးဘုရငျ့လတေပျဦးစီးခြုပျသညျ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ(လေ) နှငျ့အတူ ဂုဏျပွုတပျဖှဲ့အား စဈဆေးပွီး ဂုဏျပွုကွိုဆိုပှဲသို့ တကျရောကျလာကွသညျ့ အရာရှိကွီးမြားနှငျ့ အပွနျအလှနျမိတျဆကျ ပေးကွ သညျ။
ထို့နောကျ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ(လေ) ဗိုလျခြုပျကွီး မောငျမောငျကြျောသညျ ထိုငျးဘုရငျ့လတေပျဦးစီးခြုပျ ဦး ဆောငျသော ကိုယျစားလှယျအဖှဲ့အား ဘုရငျ့နောငျရိပျသာ ဧညျ့ခနျးမဆောငျ၌ လကျခံတှဆေုံ့သညျ။
တှဆေုံ့ပှဲသို့ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ(လေ)ဗိုလျခြုပျကွီး မောငျမောငျကြျော နှငျ့အတူ စဈဦးစီးအရာရှိခြုပျ(လေ) ဗိုလျခြုပျ ထှနျးအောငျနှငျ့ တပျမတျော(လေ)မှ အရာရှိကွီးမြား တကျရောကျကွပွီး ထိုငျးဘုရငျ့လတေပျဦးစီးခြုပျ နှငျ့အတူ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ထိုငျးဘုရငျ့လတေပျစဈသံမှူး Group. Captain Pruit Tugesuinနှငျ့ တာဝနျရှိ သူမြား တကျရောကျကွသညျ။
တှဆေုံ့ပှဲတှငျ မွနျမာ-ထိုငျး နှဈနိုငျငံလတေပျနှဈရပျအကွား ဆကျဆံမှုတိုးမွှငျ့ ဆောငျရှကျသှားမညျ့ အခွအေနမြေား၊ သငျတနျးသားမြားစလှေတျရေးဆိုငျရာ ကိစ်စရပျမြား၊ သတငျးအခကျြအလကျနှငျ့နညျးပညာမြား အပွနျအလှနျဖလှယျရေးနှငျ့ ခဈြကွညျရေးခရီးစဉျမြား အပွနျအလှနျလညျပတျရေးဆိုငျရာကိစ်စရပျမြားအား အပွနျအလှနျဆှေးနှေးခဲ့ကွပွီး ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ(လေ) ဗိုလျခြုပျကွီးမောငျမောငျကြျော က ထိုငျးဘုရငျ့ လတေပျဦးစီးခြုပျ Air Chief Marshal Chaiyapruk Didyasarin အား မွနျမာ့တပျမတျော(လေ)၏ ဂုဏျထူး ဆောငျလသေူရဲတောငျပံတံဆိပျကို တပျဆငျပေးအပျသညျ။ ထိုသို့ ဂုဏျထူးဆောငျလသေူရဲတောငျပံတံဆိပျမှာ ပွညျပတပျမတျောအကွီးအကဲ တဈဦးအား ပထမဦးဆုံးအကွိမျ ဂုဏျပွုပေးအပျခွငျးဖွဈသညျ။ ထို့နောကျ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ(လေ)နှငျ့ ထိုငျးဘုရငျ့လတေပျဦးစီးခြုပျတို့သညျ အမှတျတရလကျဆောငျမြား အပွနျ အလှနျပေးအပျ၍ အဖှဲ့ဝငျမြားနှငျ့အတူ စုပေါငျးဓာတျပုံရိုကျကွ သညျ။
၎င်းငျးနောကျ ထိုငျးဘုရငျ့လတေပျဦးစီးခြုပျက ဘုရငျ့နောငျရိပျသာ ဧညျ့သညျတျောမှတျတမျးစာအုပျတှငျ မှတျတမျး တငျလကျမှတျရေးထိုးသညျ။
ထို့နောကျ နလေ့ညျပိုငျးတှငျ ထိုငျးဘုရငျ့လတေပျဦးစီးခြုပျနှငျ့ဇနီး ဦးဆောငျသော ကိုယျစားလှယျအဖှဲ့အား ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ(လေ)နှငျ့ဇနီးတို့က နပွေညျတျောရှိ ရှနေနျးတျောဟိုတယျ၌ ဂုဏျပွုနလေ့ယျစာဖွငျ့ တညျခငျးဧညျ့ခံခဲ့ပွီး အမှတျတရလကျဆောငျပစ်စညျးမြား အပွနျအလှနျပေးအပျခဲ့ကွသညျ။
အဆိုပါ ထိုငျးဘုရငျ့လတေပျဦးစီးခြုပျ ဦးဆောငျသော ကိုယျစားလှယျအဖှဲ့သညျ ယနနေံ့နကျပိုငျးတှငျ နပွေညျ တျောလဆေိပျသို့ရောကျရှိခဲ့ရာ နပွေညျတျောတိုငျး စဈဌာနခြုပျတိုငျးမှူး ဗိုလျခြုပျမွငျ့မျောနှငျ့ ကာကှယျ ရေးဦးစီး ခြုပျရုံး(လေ)မှ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြား၊မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ထိုငျးနိုငျငံစဈသံမှူးမြားနှငျ့ တာဝနျရှိသူမြားက လဆေိပျတှငျကွိုဆိုနှုတျဆကျခဲ့ကွကွောငျး သတငျးရရှိသညျ။